သူပွိုငျကိုပွိုငျ – My Blog
မီးရောငျစုံလငျးလိုကျမှိတျလိုကျနဲ့ တီးလုံးသံတှအေောကျမှာ တဈယောကျထဲလူးလှနျ့ပွီစိတျလိုလကျရ ကသေီတဈယောကျကနမေိသညျ။ ဖငျလေးကိုလှုပျခါလှုပျခါဖွငျ့ဆကျဆီကကြအြကကွောငျ့ မကျြလုံးပေါငျးမြားစှာ၏စူးစိုကျခွငျးကိုခံနရေလသေညျ။ အနောကျကနေ ပုခုံးလှမျးပုတျလိုကျသောကွောငျ့ အလနျ့တကွားလှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ တဈရုံးထဲအလုပျလုပျသူ သန်တာတဈယောကျဖွဈနသေဖွငျ့ဝမျးသာအားရ ” ဟယျ..သန်တာ..” ” ကောငျမရီး… တဈယောကျထဲလာကဲနတေယျ ကွညျ့စမျး ..ငါ့ကိုတောငျမချေါဘူး..” ကသေီတဈယောကျ သန်တာကို ခါးဖကျပွီး ပါးကိုအနမျးတဈပှငျ့ခြှကော လူကွားထဲမှအပွငျသို့ နှဈယောကျသားတိုးထှကျလာလိုကျသညျ။ တီးလုံးသံဝေးတဲ့နရောရောကျတော့မှ သန်တာ့ကို ” ငါစိတျရှုပျလို့ထှကျလာတာပါကောငျမရယျ.. ။
နငျကကော ဘယျသူနဲ့လဲ ..နငျ့ဘဲပါလား ..” ” ဟိုဘဲကိုခေါကျထားလိုကျပွီဟ.. အခုက ဟိုတဈလောကတှတေဲ့တဈယောကျနဲ့လာတာ.. သူတို့ကဝိုငျးမှာထိုငျသောကျနတေယျ ငါကနငျ့ကိုတှလေို့လာချေါတာ..” ” အေးပါကောငျမရယျ သှားမယျ..” ဟု ပွောလိုကျပီး ဘေးရှိဝိတျတာတဈယောကျကို ” မောငျလေး.. အမဝိုငျးကိုနရောလေးရှပေ့ေးပါ..” သန်တာခါးကိုဖတျပီး သူတို့ဝိုငျးသို့လိုကျသှားလိုကျသညျ။ ဝိုငျးသို့ရောကျသျော သန်တာက ဘဲတဈဘှပေေါငျပျေါတကျထိုငျလိုကျပွီး ” ဒါငါ့ခဈြခဈြလေ ..ကိုတာယာတဲ့ ..ဟိုဘကျက ကိုတာ့သူငယျခငျြး နောငျရိုးတဲ့ ..”
” တှရေ့တာဝမျးသာပါတယျ ကိုတာယာ.. ကိုနောငျရိုး..” ကသေီကနှုတျဆကျလိုကျပွီး ထိုငျရမယျ့နရောကိုမကျြစိကစားလိုကျသညျ။ နှဈယောကျထိုငျဆိုဖာနှဈလုံးနှငျ့အလညျက စားပှဲဝိုငျးသာပါသောကွောငျ့ နောငျရိုးဆိုသညျ့လူဘေးနား ထိုငျလိုကျသညျ။ ဝိတျတာလေးက သူမသောကျနသေညျ့ ဝိုငျပုလငျးနှငျ့အမွညျးပနျကနျကို လာခပြေးတော့ နောငျရိုးဆိုသညျ့လူက ” ဝိုငျပဲလား ..သန်တာကတော့အပွငျးခနြတော..” ” အစတုနျးကတဈယောကျထဲဆိုတော့.. အရမျးမမူးအောငျအပြော့ပဲမှာထားတာ.. အခုတော့အဖှဲတောငျ့ပီဆိုတော့ အပွငျးကိုငျမယျလေ..။
ဟိဟိ..” သနျတာက ” ကောငျမရီး ..ခြီးယားဈ..” ဟူ၍ သူ့ရှကေ့ခှကျကိုမွှောကျလိုကျတော့သညျ။ လေးယောကျသားသောကျလိုကျကလိုကျဖွငျ့ အတျောလေးထှလောသောအခါ သန်တာက ” ပငျြးလာပွီ.. ကနျဘောငျဘကျသှားထိုငျရအောငျ ..” ဟုပွောပွီးလကျကနျြပုလငျးနှငျ့ အအေးအမွညျးမြားကို ပါဆယျထုပျခိုငျကာ လေးယောကျသားထှကျလာခဲ့တော့သညျ။ ကားပါကငျသို့သှားနသေဖွငျ့ ကသေီတဈယောကျ ကားပါလာတာပဲ ဟုတှေးမိပီး သန်တာ့ကိုကွညျ့လိုကျတော့ သူ့ဘဲအသဈနှငျ့သာယာနသေဖွငျ့ ရီးစားဖွဈသူကိုလှမျးမိသလိုဖွဈသှားသညျ။
သူမ၏လကျရှိရီးစားမှာ နယျကဖွဈပီး ရနျကုနျမှာအလုပျလာလုပျရငျး သူ့ကိုသဲကွီးမဲကွီးပိုးပနျးသဖွငျ့ လကျခံပီးတှဲလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ထိုအခြိနျကသူမမှာ လကျထပျဖို့ရညျရှယျပွီးတှဲနသေောခဈြသူရှိပီး ထိုသူနှငျ့ပနျးဦးခွှခေံပွီးဖွဈနသေညျ။အစကတော့အပငျြးပွတှေဲမညျ ဟုတှေးထားသျောလညျး သူမ၏ဘဲကသိရှိသှားသဖွငျ့ နှဈဦးသားအဆငျမပွဖွေဈကာ ထိုတဈယောကျနှငျ့လကျတှဲလိုကျခွငျးပငျဖွဈတော့သညျ။ နှဈတှကွောလာသညျနှငျ့အမြှ နှဈဖကျမိဘတှနှေငျ့ပွောဆိုပီး လကျထပျဖို့ပွငျဆငျနကွေသညျ။
ကိုနောငျရိုးက ကားတံခါးဖှငျ့ပီး ” ကသေီ ..ဘာတှတှေေးနတောလဲ ကားပျေါတကျလေ..” ဟူသောစကားကွားမှ ကားရှခေ့နျးတှငျတကျထိုငျလိုကျပီး သန်တာက ” အဲ့ကောငျမ သူ့ဘဲအကွောငျးတှေးနတောနမှောပေါ့..” ” ကနျဘောငျရောကျရငျ ဓါတျပုံရိုကျပီး ဖဘေု့တျပျေါတငျမယျ.. အဲ့ဒါမှ ဟိုတဈယောကျနဲ့ကှိုငျတကျမှာ.. ဟား.. ဟား..” ” မလုပျစမျးပါနဲ့ဟာ.. ညနကေမှပွသနာတကျလာတာ.. အလကားနရေငျးခြုပျခယျြနလေို့ စိတျညဈလို့ကလပျကိုခိုးထှကျလာတာ.. နငျလုပျမှဟိုကသိပွီး ကှိုငျပိုရှာလိမျ့မယျ..” ဟုပွောလိုကျတော့ ကိုတာယာက ” ကှိုငျလိုခငျြရငျဆိုငျမှာဝယျခိုငျးလိုကျလေ.. ကသေီရဲ့..ဟဲဟဲ..” ဟုပွောလိုကျတော့ သန်တာက ” ဒါမြိုးတော့တကျတယျဟကျလား..” ဟုပွောပီး တာယာ ကြောကုနျး ကို တဘုနျးဘုနျး ထုပါတော့သညျ။ လမျးနီကနျဘောငျသို့ ရောကျသောအခါ ည၂နာရီထိုးနပွေီဖွဈသျောလညျး လူစုစုရှိနသေေးသညျ။
ကိုနောငျရိုးက ” သောကျဦးမယျမှတျလား ..တာယာ ..” ” သောကျမှာပေါ့ကိုနောငျရိုးရယျ.. စဉျးစားနတော ဘယျလိုသောကျရမလဲလို့ ..ကနျဘောငျမှာထိုငျသောကျရငျ အဖမျးကခံရဦးမယျ အခြုပျထဲလဲမအိပျခငျြဘူးဗြ..” ” မငျးတို့နှဈယောကျ ကနျဘောငျပျေါသှားလေ ငါနဲ့ကသေီနဲ့ကားပျေါမှာထိုငျသောကျမယျ..မငျးတို့ပွနျလာမှ ငါတို့တဈလှညျ့တကျမယျ ..” သန်တာက ကနျဘောငျပျေါပွေးတကျသှားပီး တာယာကအနောကျကနလေိုကျတကျသှားတော့မှ ကိုနောငျရိုးက အရကျကိုတဈခါသုံးခှကျလေးထဲငှဲလိုကျပီး ” ဘာတှညေဈနတောလဲကသေီ.. ရငျဖှငျ့ခငျြဖှငျ့လို့ရတယျနျော..” ဟုပွောလိုကျပွီးကသေီ့လကျသို့အရကျခှကျကမျးပေးသညျ။
အရကျတဈငုံသောကျလိုကျပီး ကသေီက ” ဒီလိုပါပဲ ကိုနောငျရိုးရယျ.. လကျရှိဘဲပေါ့.. အဟကျဟကျ.. တျောတျောတရားတဲ့လူ ပထမဘဲက ခြုပျခယျြလို့ သူနဲ့ဆိုရငျလှတျလပျမလားဆိုပွီးတှဲမိပါတယျ .. အစတုနျးကတော့လုပျခငျြတာလုပျ ဘာမှမပွောဘူး.. အခုနောကျပိုငျးလဲကရြော ဟိုမသှားနဲ့ဒီမသှားနဲ့.. ဟိုလူနဲ့မတှဲနဲ့ဒီလူနဲ့မတှဲနဲ့ဆိုပီး လိုကျခြုပျခယျြနတေယျလေ..” ” အျော..ညီမရယျ သူက ညီမကိုခဈြလို့ခြုပျခယျြတာနမှောပေါ့.. တဈခွားလူတှနေဲ့ဆိုရငျ ညီမလိုခြောခြောလှလှလေးကိုစိတျမခလြို့ နမှောပါ..” ” အလကားပါကိုနောငျရိုးရာ.. သူ့တုနျးကလဲ ညီမက ရီးစားရှိတာသိသိနဲ့လိုကျတာ နောကျဆုံး ဟိုတဈယောကျနဲ့ဖွဈပွီးပါပီပွောတာကို လကျခံတယျဆိုတာကွီးပဲ.. လုပျခငျြတာလုပျပါတဲ့..သူ့ကိုခဈြနရေငျရပွီ ဆိုပွီးပွောတာ..” ဟုပွောလိုကျပွီး ” အမွညျးတှကေော ကိုနောငျရိုး..” ” အမွညျးတှနေဲ့ရှခေ့နျးမှာထားဖို့နရောအဆငျမပွဘေူး.. ။
ကားအနောကျခနျးသှားမလား ..” ” သှားလေ ..အမွညျးမပါတော့ သောကျလို့မကောငျးဘူး..” ဟုပွောပီး ကားအနောကျခနျးသို့အရှခေ့နျးကနေ ကြျောတကျလိုကျသညျ စကပျအတိုလေးဝတျထားသဖွငျ့ ဖွူဖှေးဝငျးမှတျနသေောပေါငျသားလေးမြားကွားမှ ပနျးရောငျအတှငျးခံလေးကထငျးခနဲနောငျရိုးမကျြစိထဲမွငျဖွဈအောငျမွငျလိုကျသေးသညျ။ ကားအနောကျခနျးကသေီရောကျတော့ ရှခေ့နျးကနေ အရကျအမွညျးနငျ့ရခေဲစသညျတို့ကိုလှမျးပေးလိုကျပွီး အမွညျးထုတျတှကေို အရှထေို့ငျခုံအနောကျဘကျ ခြိတျတှငျခြိတျခိုငျးလိုကျပီး အနောကျခနျးသို့ ကသေီ့ကဲ့သို့ကြျောခှပွောငျးလိုကျသညျ။
တမငျတကာပငျ ခွခြေျောသညျ့ပုံစံလုပျပီး ကသေီ့ဘကျသို့ လညျကအြောငျဖနျတီးလိုကျသညျ့အခြိနျတှေ ကသေီက လှမျးထိနျးပေးသဖွငျ့ရငျခှငျထဲသို့မသိမသာလကျတဈဖကျကိုလှမျးထောကျလိုကျသညျပွီး လကျဝါးနှငျထိမိသညျ့နို့အုံကိုတဈခကျြညှဈလိုကျပါတော့သညျ ” အမေ့ ..” ကသေီ့ပါးစပျကယောငျပွီးထှကျလာသညျနှငျ့လကျကိုပွနျရုပျကာ ” ဆောရီးညီမ ..အကိုခြျောသှားလို့..” ဟုပွောပွီး ဘေးသို့ထိုငျခလြိုကျသညျ။
ကားအနောကျခနျးက လူ၎ယောကျလောကျထိုငျလို့ရပမေယျ့ ကသေီ့နားတိုးထိုငျပီး အရကျကိုခှကျထဲငှဲ့ကာ တဈကြိုကျထဲမော့သောကျလိုကျတော့သညျ။ နောငျရိုး ၏လကျက တမငျကိုငျလိုကျမှနျးသတိထားမိသှားသောကသေီမှာစိတျထဲဖငျြးကနညျးဖွဈသှားပွီး ပိပိလေးပငျရှုံ့မိသှားသညျ။စိတျထဲကနလေဲ နာမညျကသာရိုးတာလူကမရိုးဘူးပဲဟုတှေးလိုကျပွီး လကျထဲရှိခှကျကို အကုနျမော့ခလြိုကျပါတော့သညျ။ ” ကိုနောငျရိုးအကွောငျးလဲပွောပွလေ..” နောငျရိုးက အမွညျးတဈဖကျကိုတူနဲ့လှမျးဆှဲရငျး ပါးစပျထဲထညျ့ဝါးကာ ” ထှထှေထေူးထူးပွောစရာမရှိပါဘူး.. ကြှနျတျောက စတိုးဆိုငျဖှငျ့ထားတယျ.. အားတဲ့အခြိနျသူငယျခငျြးတှနေဲ့တှတေ့ယျ .. ဒီလောကျပါပဲ..” ဟုပွောပွီး အမွညျးတဈဖကျကို တူလေးဖွငျ့ညှပျကာ ပါးစပျနားလှမျးပေးသညျ။
ကသေီကလဲ အလိုကျသတိနဲ့ တူပါဝငျတဲ့အထိပါးစပျလေးဟပွီးလှမျးဟတျလိုကျသညျ။ လကျထဲကုနျသှားသောခှကျထဲလဲ ထပျမံဖွညျ့ပေးနတေုနျးကသေီက ” အခဈြရေးကိုမေးတာကိုနောငျရိုးရဲ့.” ဟုပွောလိုကျတော့ သူကရယျပွီး ” ကြှနျတျောက အိမျထောငျကှဲပါ.. မိနျးမကပဈသှားတယျဆိုပါတော့ဗြာ..” ကသေီက မကျြခုံးလေးပငျ့ပီး ” ဘယျလိုဖွဈတာလဲ ကိုနောငျရိုးရဲ့..” ” ကြှနျတေျာ့ဒဏျမခံနိုငျလို့ ..” ကသေီက ” ကိုနောငျရိုးကဆိုးလို့လား..” ” အသောကျအစားနညျးနညျးတော့ရှိတာပေါ့ဗြာ.. ။
သူကလဲမပွောပါဘူးသောကျတာစားတာကို..” ” အရမျးမူးအောငျသောကျလို့လား ဒါဆို..” ဟုမေးလိုကျတော့ နောငျရိုးက ကသေီ့နားနားကိုကပျပီး ” အမူးလှနျပီးအိပျပြျောသှားရငျ သူကပိုတောငျသဘောကသြေးတယျ.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောကအရမျးထနျလို့လေ ..” ဟုပွောလိုကျတော့သညျ။ နားထဲသို့ အရမျးထနျလို့လေ ဟူသောစကားသံနှငျ့အတူ မကျြစိထဲ ကိုနောငျရိုးလို ရငျအုပျကယျြကယျြဗလကောငျးကောငျးက တရစပျပဈဆောငျ့နသေညျ့ပုံမွငျယောငျမိပွီး လကျထဲကကိုငျထားသညျ့တဈခါသုံးခှကျလေးကို ညှဈမိလိုကျပါတော့သညျ။အရကျမြားပေါငျပျေါသို့ ဖိတျကကြုနျတော့ သူမရော နောငျရိုးပါ အလနျ့တကွားဖွဈသှားပီး ကားရှခေ့နျးရှိတဈရှုးဘူးကို နှဈယောကျသားလှမျးယူလိုကျတော့သညျ။
နှဈဦးလုံးတဈပွိုငျထဲယူလိုကျသလိုဖွဈသှားသောကွောငျ့မကျြနှာခငျြးတျောတျောနီးကပျသှားသညျ။ နောငျရိုးက လြှော့ပေးပွီး ပွနျထိုငျလိုကျသဖွငျ့ ကသေီက အရှဘေ့ကျ တစိရှုးဘူးထဲကတဈရှုးမြားထုပျလိုကျပွီး အနောကျဘကျကိုလှမျးပေးကာ ” ကိုနောငျရိုးယူထား ..” ဟုပွောပီ တဈရှုးမြားကို တဈရှကျခငျြးထုတျယူကာ နောကျကွညျ့မှနျကနေ လှမျးကွညျ့လိုကျသညျ။ လိုအပျတာထကျပိုကုနျးထားသဖွငျ့ သူမဖငျမှာ နောငျရိုးမကျြနှာနှငျ့တဈတနျးထဲဖွဈနပေီး နောငျရိုးမှာလဲ ယခုပငျ ကိုကျစားတော့မတကျ စူးစိုကျကွညျ့နသေညျကိုတှလေို့ကျရသညျ။ ငှရေောငျကိုယျကပျြစကပျအတိုလေးအောကျက ပငျတီယာလေးထငျးနသေညျကို ကွညျ့ရငျးနောငျရိုးတဈယောကျအာခေါငျခွောကျလာကာ လကျထဲကခှကျကို မော့လိုကျပါတော့သညျ။
တဈရှုးယူပွီး ပွနျအထိုငျနှငျ့တိုးသောအခါ လကျကိုဖငျဖွငျ့ရိုငျခလြိုကျသလိုဖွဈသှားပီး တဈဝကျလောကျမှောကျကသြှားပါတော့သညျ။ကသေီက ” အယျ ..မှောကျပွနျပွီ ..ဟိဟိ ..” နောငျရိုးပေါငျပျေါသို့မှောကျကနြသေော အရကျမြားကို တဈရှုးဖွငျ့ သုပျပေးပါတော့သညျ။ ” မှောငျနတေယျမမွငျရဘူး..” ” ဟုတျတယျ.. မှောငျနရေငျသိပျမကောငျးဘူး .. ကြှနျတျောကမီးဖှငျ့ထားမှအားရတာ .. ” ” ကိုနောငျရိုးစကားကွီးကလဲ ကွောကျစရာကွီး..” ” ကသေီကလဲဗြာ.. ကြှနျတျောကပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောတကျလို့ပါ.. ကြှနျတေျာ့မိနျးမက မီးပိတျထားမှနတေကျတာ..
ကြှနျတျောကမီးဖှငျ့ထားခငျြတာ.. အဲ့မှာစတာပဲ ပွဿနာက..” ” ဟုတျ ” ” နောကျပွီးတော့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမက ကသေီ့လိုတောငျ့တောငျ့တငျးတငျးမဟုတျဘူး.. လူကောငျသေးတယျ..” ” ရှငျ..” ” အတညျပွောတာ.. လူကောငျကခပျသေးသေး ပိနျပိနျပါးပါးလေး.. ကသေီ့လိုသာ တောငျ့ရငျတော့ မီးဖှငျ့ပွီးဆှဲလိုကျရရငျ.. အမွငျရော.. အကွားရော.. အထိအတှရေ့ော.. အကုနျအရသာရှိလိုကျမယျ့ဖွဈခွငျးဗြာ..” ” ညီမကတောငျ့တယျထငျတယျပေါ့လေ.. သန်တာက ပိုတောငျ့တာမဟုတျဘူးလား..” ” သန်တာက အိုးကောငျးတယျချေါတယျ ကသေီရဲ့.. အိုးပဲကောငျးတာပါ နို့ကတြော့ ကသေီကပိုထှားတာ..။
လေးဘကျကုနျးဆှဲရငျ နို့တှရေမျးခါနမှောပဲ.. တာယာက အိုးကွီးတာကွိုကျတာလေ. အဲ့ဒါကွောငျ့ သန်တာနားကပျနတော ..” ကလပျမှာထဲကအနညျးငယျထှလောကွသဖွငျ့ စကားတှကေ အနှောငျ့အသှားမလှတျတာကို နှဈယောကျသားပွောဆိုနကွေပွီဖွဈသညျ။ ကသေီကစကားပွောရငျး နောငျရိုးဘောငျးဘီပျေါသို့ဖိတျကွထားသညျ့အရကျမြားကို သသေခြောခြာသုပျပါတော့သညျ။ ပေါငျရငျးနားကိုသုပျနရေငျး ကသေီက ပေါငျကွားဂှထဲကဖုဖုဖောငျးဖောငျးကွီးကိုစမျးမိကာ စိတျထဲမှနေ၍ကွီးတာတော့ကွီးလောကျတယျဟုတှေးနမေိသညျ။ ၂ယောကျသား သောကျလိုကျ ရိသဲသဲစကားပွောလိုကျဖွငျ့ တဈနာရီကွာသညျအထိကားပျေါထိုငျနပွေီးမှ သန်တာနှငျ့တာယာတို့ပွနျရောကျလာသညျ။
တာယာကပွုံးစိစိလုပျနပွေီး ” ကသေီပွနျဖို့နောကျကနြဦေးမယျ..” ကသေီက ရီဝဝေဖွေငျ့ကွညျ့ကာ ” အိမျမပွနျလဲရတယျ.. ပွနျလဲရတယျ ..အေးဆေးပဲ..” ” ကောငျမရီးတျောတျောကောငျးနပွေီလား.. ငါတော့တျောတျောလေးကောငျးတယျကနျဘောငျပျေါသှားရတာ.. ဟိဟိ ..” ဟုပွောပွီး ကားနောကျခနျးသို့နှဈယောကျသားဝငျလာပါတော့သညျ။ နောငျရိုးက ဘေးကပျပေးသျောလညျး ကသေီ့ပေါငျတဈဘကျက နောငျရိုးပေါငျပျေါတငျကာ ဘေးတဈစောငျးဖွဈနပေါတော့သညျ။ သန်တာက အရကျတဈခှကျငှဲ့သောကျလိုကျပွီး တာယာ့ဘကျကိုလှညျ့ကာ နှုတျခမျးခငျြးတပွေီ့း အရကျ တိုကျလိုကျသညျ။
တာယာကနှုတျခမျးကိုစုပျပွီး ” အရကျကပြော့သှားသလိုပဲကှာ..” ” ကိုနောငျရိုးနဲ့ကသေီအားကအြောငျတမငျလုပျလိုကျတာ ဟားဟား..” ကားနောကျခနျးမှာ လေးယောကျထိုငျရငျး အရကျကိုသောကျနကွေသျောလညျး သန်တာပေါငျကိုတာယာကပှတျလိုကျ နို့ကိုမထိတထိ ကိုငျလိုကျဖွငျ့လုပျပွနတေော့ နောငျရိုးက ” ငါတို့တဈနရောရာသှားရအောငျ ဒီမှာကကွာနပွေီဆိုတော့ပငျြးလာပွီကှ..” ” အဲ့ဒါဆိုသှားနကွေနရောပဲ သှားရအောငျလေ..ဒီတဈခါကသေီပါ ပါလာတော့ လူပိုစညျတာပေါ့..” နောငျရိုးက ကသေီ့ပေါငျလုံးလေးတှကေိုလကျနဲ့မသိမသာပှတျလိုကျပွီး ” ကသေီလနျ့နပေါဦးမယျ မငျးတို့ကလဲ..ဟိုရောကျမှကွညျ့စီစဉျတာပေါ့ ..” ကားလေးကိုအသာအယာပငျ သှားနကွေဟျောတယျသို့နောငျရိုးကမောငျးသှားလိုကျသညျ။ ကားပါကငျထိုးပွီးတော့ ဧညျ့ကွို့ကောငျလေးလိုကျပို့သော အခနျးတဈခုထဲလေးယောကျသားဝငျလိုကျပွီး အမွညျးနှငျ့သောကျစရာမြားကိုထပျမှာလိုကျသညျ။ အခနျးက အခနျးကယျြအမြိုးအစားဖွဈပွီး နှဈယောကျအိပျကုတငျနှဈလုံးပါရှိသညျ ဒေါငျ့ခြိုးပုံစံအခနျးဖှဲ့စညျးပုံကွောငျ့ ကုတငျနှဈလုံးက တဈခုနှငျ့တဈခုမကျြကှကျအနအေထားရှိနလေသေညျ။
အလညျရှိ စားပှဲတှငျထိုငျနပေါက ကုတငျနှဈခုလုံးအတိုငျးသားမွငျနရေလသေညျ။ တဈခွားတဈခနျးကတော့ ရခြေိုးခနျးအိမျသာ ဖွဈသညျ။ သန်တာ့ကို တာယာက ကုတငျတဈလုံးပျေါတှနျးလှဲလိုကျပွီးအပျေါကနထေပျကာ နှုတျခမျးခငျြးနမျးနတေုနျး ကသေီက ရခြေိုးခနျးထဲဝငျလိုကျပွီး ကိုယျလကျသနျ့စငျလိုကျသညျ။ အပွငျရောကျတော့ သန်တာ့အပျေါပိုငျးက ဘျောလီလေးသာကနျြရှိနပွေီး တာယာက အပျေါပိုငျးဗလာကငျြးဖွငျ့ သန်တာရငျညှနျ့ကိုနမျးလြှကျရှိသညျ။
စာပှဲခုံမှာ နောငျရိုးက ဟျောတညျကလာပို့သညျ့အရကျကိုစိမျပွနေပွသေောကျရငျး ” ကသေီ ..လာလပှေဲကောငျးနပွေီ.. လာကွညျ့လှညျ့..” ” အာ.. မကျြစိရှကျစရာတှေ ဘာတှမှေနျးလဲသိဘူး..” သန်တာက တာယာ့ဦးခေါငျးကို ဗိုကျပျေါသို့ရှပေ့ေးရငျးကနေ၍ ” ပိုမနနေဲ့ကောငျမရီး.. နငျ့ဖုနျးထဲမှာအောကားတှထေညျ့ထားတာငါသိတာပဲ.. အခု အောကားကွညျ့နတေယျသဘောထားလိုကျ.. အာ့..နာတယျ..မကိုကျနဲ့လကေိုတာကလဲ..” ကသေီက စားပှဲရှိရာသို့သှားလိုကျပွီး အရကျခှကျ တဈခုကိုယူကာ သန်တာနှငျ့ တာယာတို့စုံတှဲရှိရာသို့လှမျးသှားလိုကျသညျ သန်တာ ဗိုကျကိုနမျးရှုံ့ယကျနသေော တာယာက မော့ကွညျ့တော့ ကသေီက အရကျခှကျကို သန်တာဗိုကျဖွူဖွူလေးပျေါနညျးနညျးသှနျခလြိုကျပွီး သောကျလကေိုတာယာ ဟငျးဟငျး တာယာက လြှာဖွငျ့လိုကျယကျနရေငျ လကျမထောငျပွသညျ။
ကနျြအရကျမြားကို သန်တာကမော့လိုကျပွီး ” ကှကိုယျထိုငျနစေမျးပါကောငျမရီးရယျ.. နောကျမှ တိုကျတော့ ငါဂှတျတော့မှာဟ..” တာယာက မပွောမဆို ပေါငျနှဈခြောငျးကိုဆှဲထောငျကာ အဖုတျ ကိုကုနျးယကျတော့သညျ။စကပျကအတို အတှငျးခံဘောငျးဘီကိုမခြှတျပဲ ယကျနတောတောငျ သန်တာတဈယောကျပါးစပျကွီးဟ၍ ” ကောငျးလိုကျတာ.. ယကျ.. ယကျ အရမျးမိုကျတယျ.. အား.. ရှီး..” ကသေီတဈယောကျ စားပှဲရှိရာပွနျသှားလိုကျတော့ နောငျရိုးက တဈခွားခုံမှာပေးမထိုငျပဲ ကသေီ့ကိုလှမျးဆှဲကာ ပေါငျပျေါတငျလိုကျလသေညျ အလိုကျသငျ့လေးထိုငျလိုကျရငျး ကသေီက နောငျရိုးကိုကွညျ့လိုကျတော့ ကသေီ့ခါးကိုဖကျထားရငျးနှုတျခမျးလေးကိုလှမျးနမျးပါတော့သညျ။ အရကျအရှိနျကလဲပါ ကားပျေါမှာထဲက စကားတှခေျေါထားပွီးသားဖွဈနသေဖွငျ့ ကသေီလဲငွငျးဆနျမနတေော့ပဲ စိတျကိုလှတျကာ အလိုကျသငျ့နလေိုကျပါတော့သညျ။ နောငျရိုးကလကျသှကျသညျ နှုတျခမျးခငျြးနမျးနရေငျးလြှာတိုကျစဈဆငျသလို လကျကလဲ နို့အုံကို အင်ျကြီပျေါကနေ ကိုငျသညျ ပေါငျကွားထဲကိုနှိုကျသညျ။
အရညျထှကျနပွေီဖွဈသညျ့ကသေီ့ အဖုတျထဲကို လကျခလညျထိုးထညျ့နတေုနျး သန်တာတို့အတှဲထံမှ လိုးသံဆူညံစှာထှကျပျေါလာပါတော့သညျ။ ကသေီလှမျးကွညျ့လိုကျတော့ တာယာ့ကိုယျလုံးကွီးက ကုတငျပျေါတှငျ ခါးကိုကိုငျးကိုငျးပွီး ဆောငျ့ဆောငျ့ခနြလေသေညျ။ နောငျရိုးက ကသေီ့အင်ျကြီကိုဆှဲလှနျကာ နို့တဈလုံးကိုဖမျးစို့ရငျး ညာဘကျလကျက ခပျသှကျသှကျ အဖုတျထဲသို့အထုတျအသှငျးလုပျတော့သညျ သန်တာတို့အတှဲကိုကွညျ့ရငျး ကသေီက စိတျတှအေရမျးပါလာပွီး နောငျရိုးလကျကိုဆှဲကာ တဈခွားကုတငျဆီသို့ သှားလိုကျသညျ နောငျရိုးကိုကုတငျပျေါတှနျးလိုကျရငျး ဘောငျးဘီကိုခြှတျကာကွညျ့လိုကျတော့ လီးကွီးက အမှေးမြားရိတျထားကာနောကျရိုးဗိုကျပျေါတှငျလှနျတငျနပွေီး ခကျြနားအထိရောကျအောငျရှညျသညျကိုတှလေို့ကျရလသေညျ။ကသေီတဈယောကျ တံတှေးကိုမြိုခလြိုကျပွီး ဂှေးဥ အပျေါပိုငျးလီးအရငျးကနေ၍ လြှာဖွငျ့စတငျယကျပါတော့သညျ။
ဟိုဘကျကုတငျကလဲပှဲကွမျးသညျ ဆီးခုံလငျြထိသံ ငွီးတှားသံတို့က စညျးခကျြညီညီထှကျပျေါနလေသေညျ။ ကသေီလဲ နောငျရိုးလီးကိုယကျရငျး လီးထိပျရောကျတော့ ပါးစပျဖွငျ့ငုံလိုကျသညျ။ ဒဈတဈခုလုံးမနညျးဝငျအောငျငုံနရေပွီး လြှာဖြားလေးဖွငျ့ လီးထိပျကိုထိုးကလိလိုကျတော့ နောငျရိုးက ” ကသေီ.. နောကျမှစုပျတော့ ..လိုးရအောငျ..” ရမ်မကျအသံဖွငျ့ ပွောလာသဖွငျ့ ကသေီက ကွာကွညျ့ကွညျ့ပွီး စကပျကိုမကာ အပျေါမှခှလိုကျပါတော့သညျ။လီးထိပျတညျ့တညျ့ကိုခြိနျရငျး စိတျထဲကနေ၍ ဒီလီးကွီးနဲ့လိုးလို့ဖွဈပါ့မလား ဟုတှေးနတေုနျး ခါးကိုကိုငျကာ အမှတျတမဲ့ဆောငျ့ခခြွငျးခံလိုကျရလသေညျ ။
” ဗွဈ ..ဗွဈ ..အား ..နာတယျကိုနောငျရိုး..” ” ကပျြလိုကျတာကှာ .. ဒဈပဲဝငျသေးတယျအရမျးကပျြနပွေီ.. အရငျဘဲတှကေမလိုးဘူးလား..” ” လိုးတာပေါ့အကိုရာ.. ဒါပမေယျ့အကို့လီးလောကျမှမကွီးတာ.. အမလေး..ဖွညျးဖွညျးအကို..ဖွညျးဖွညျး..အဖုတျထဲပွညျ့နပွေီ ..” ” အရမျးကောငျးတယျကှာ..” အဆုံးထိဆောငျ့ခပြါတော့ညီမရာ..” ကသေီလဲအံကိုကြိတျပွီး လီးကွီးကို စောကျဖုတျထဲတဈဆုံးရောကျအောငျထိုငျခလြိုကျပါတော့သညျ။ စိတျထဲကအဆုံးထိကောငျးသှားပွီး စောကျရညျတှပှေကျခနညျးအံကလြာတာကိုမိနျးကလေးပီပီ သိရှိလိုကျသညျ။
အဖုတျကကပျြသညျ့အပွငျလီးတဈဆုံးဝငျသညျနှငျ့စောကျရညျတှထှေကျကွလာသညျနှငျ့နောငျရိုးက ခါးကိုကော့ကာ ပငျ့ဆောငျ့တော့သညျ။အစပိုငျးကခပျမှနျမှနျဆောငျ့နရေငျးက ကသေီကိုယျတိုငျစိတျပါလာသဖွငျ့ အပျေါကနေ၍ လီးတဈဝကျခနျ့အထုတျအသှငျးပွုကာ ပွနျလညျ့တုနျ့ပွနျနပွေီဖွဈသညျ။ နို့ထှားသဖွငျ့ ဆောငျ့လိုကျတိုငျး တုံတုံနသေညျ့မွငျကှငျးအပွငျ ကသေီ့နှုတျကနေ တိုးတိုးလေးငွီးတှားသညျ့အသံ၊ နောကျပွီးအဖုတျအတှငျးသား၏ထူးကဲသညျ့အရသာကိုခံစားနရေငျး နောငျရိုးတဈယောကျ စိတျထဲကနေ၍ ကသေီ့ကိုသုတျခမျးတဲ့အထိ အမုနျးလိုးလိုကျဦးမှပဲဟုတှေးနပေါတော့သညျ။ ပွီးပါပွီ။
မီးရောင်စုံလင်းလိုက်မှိတ်လိုက်နဲ့ တီးလုံးသံတွေအောက်မှာ တစ်ယောက်ထဲလူးလွန့်ပြီစိတ်လိုလက်ရ ကေသီတစ်ယောက်ကနေမိသည်။ ဖင်လေးကိုလှုပ်ခါလှုပ်ခါဖြင့်ဆက်ဆီကျကျအကကြောင့် မျက်လုံးပေါင်းများစွာ၏စူးစိုက်ခြင်းကိုခံနေရလေသည်။ အနောက်ကနေ ပုခုံးလှမ်းပုတ်လိုက်သောကြောင့် အလန့်တကြားလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ရုံးထဲအလုပ်လုပ်သူ သန္တာတစ်ယောက်ဖြစ်နေသဖြင့်ဝမ်းသာအားရ ” ဟယ်..သန္တာ..” ” ကောင်မရီး… တစ်ယောက်ထဲလာကဲနေတယ် ကြည့်စမ်း ..ငါ့ကိုတောင်မခေါ်ဘူး..” ကေသီတစ်ယောက် သန္တာကို ခါးဖက်ပြီး ပါးကိုအနမ်းတစ်ပွင့်ချွေကာ လူကြားထဲမှအပြင်သို့ နှစ်ယောက်သားတိုးထွက်လာလိုက်သည်။ တီးလုံးသံဝေးတဲ့နေရာရောက်တော့မှ သန္တာ့ကို ” ငါစိတ်ရှုပ်လို့ထွက်လာတာပါကောင်မရယ်.. ။
နင်ကကော ဘယ်သူနဲ့လဲ ..နင့်ဘဲပါလား ..” ” ဟိုဘဲကိုခေါက်ထားလိုက်ပြီဟ.. အခုက ဟိုတစ်လောကတွေ့တဲ့တစ်ယောက်နဲ့လာတာ.. သူတို့ကဝိုင်းမှာထိုင်သောက်နေတယ် ငါကနင့်ကိုတွေ့လို့လာခေါ်တာ..” ” အေးပါကောင်မရယ် သွားမယ်..” ဟု ပြောလိုက်ပီး ဘေးရှိဝိတ်တာတစ်ယောက်ကို ” မောင်လေး.. အမဝိုင်းကိုနေရာလေးရွှေ့ပေးပါ..” သန္တာခါးကိုဖတ်ပီး သူတို့ဝိုင်းသို့လိုက်သွားလိုက်သည်။ ဝိုင်းသို့ရောက်သော် သန္တာက ဘဲတစ်ဘွေပေါင်ပေါ်တက်ထိုင်လိုက်ပြီး ” ဒါငါ့ချစ်ချစ်လေ ..ကိုတာယာတဲ့ ..ဟိုဘက်က ကိုတာ့သူငယ်ချင်း နောင်ရိုးတဲ့ ..”
” တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် ကိုတာယာ.. ကိုနောင်ရိုး..” ကေသီကနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီး ထိုင်ရမယ့်နေရာကိုမျက်စိကစားလိုက်သည်။ နှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာနှစ်လုံးနှင့်အလည်က စားပွဲဝိုင်းသာပါသောကြောင့် နောင်ရိုးဆိုသည့်လူဘေးနား ထိုင်လိုက်သည်။ ဝိတ်တာလေးက သူမသောက်နေသည့် ဝိုင်ပုလင်းနှင့်အမြည်းပန်ကန်ကို လာချပေးတော့ နောင်ရိုးဆိုသည့်လူက ” ဝိုင်ပဲလား ..သန္တာကတော့အပြင်းချနေတာ..” ” အစတုန်းကတစ်ယောက်ထဲဆိုတော့.. အရမ်းမမူးအောင်အပျော့ပဲမှာထားတာ.. အခုတော့အဖွဲတောင့်ပီဆိုတော့ အပြင်းကိုင်မယ်လေ..။
ဟိဟိ..” သန်တာက ” ကောင်မရီး ..ချီးယားစ်..” ဟူ၍ သူ့ရှေ့ကခွက်ကိုမြှောက်လိုက်တော့သည်။ လေးယောက်သားသောက်လိုက်ကလိုက်ဖြင့် အတော်လေးထွေလာသောအခါ သန္တာက ” ပျင်းလာပြီ.. ကန်ဘောင်ဘက်သွားထိုင်ရအောင် ..” ဟုပြောပြီးလက်ကျန်ပုလင်းနှင့် အအေးအမြည်းများကို ပါဆယ်ထုပ်ခိုင်ကာ လေးယောက်သားထွက်လာခဲ့တော့သည်။ ကားပါကင်သို့သွားနေသဖြင့် ကေသီတစ်ယောက် ကားပါလာတာပဲ ဟုတွေးမိပီး သန္တာ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ သူ့ဘဲအသစ်နှင့်သာယာနေသဖြင့် ရီးစားဖြစ်သူကိုလွမ်းမိသလိုဖြစ်သွားသည်။
သူမ၏လက်ရှိရီးစားမှာ နယ်ကဖြစ်ပီး ရန်ကုန်မှာအလုပ်လာလုပ်ရင်း သူ့ကိုသဲကြီးမဲကြီးပိုးပန်းသဖြင့် လက်ခံပီးတွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ထိုအချိန်ကသူမမှာ လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတွဲနေသောချစ်သူရှိပီး ထိုသူနှင့်ပန်းဦးခြွေခံပြီးဖြစ်နေသည်။အစကတော့အပျင်းပြေတွဲမည် ဟုတွေးထားသော်လည်း သူမ၏ဘဲကသိရှိသွားသဖြင့် နှစ်ဦးသားအဆင်မပြေဖြစ်ကာ ထိုတစ်ယောက်နှင့်လက်တွဲလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တော့သည်။ နှစ်တွေကြာလာသည်နှင့်အမျှ နှစ်ဖက်မိဘတွေနှင့်ပြောဆိုပီး လက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြသည်။
ကိုနောင်ရိုးက ကားတံခါးဖွင့်ပီး ” ကေသီ ..ဘာတွေတွေးနေတာလဲ ကားပေါ်တက်လေ..” ဟူသောစကားကြားမှ ကားရှေ့ခန်းတွင်တက်ထိုင်လိုက်ပီး သန္တာက ” အဲ့ကောင်မ သူ့ဘဲအကြောင်းတွေးနေတာနေမှာပေါ့..” ” ကန်ဘောင်ရောက်ရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပီး ဖေ့ဘုတ်ပေါ်တင်မယ်.. အဲ့ဒါမှ ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ကွိုင်တက်မှာ.. ဟား.. ဟား..” ” မလုပ်စမ်းပါနဲ့ဟာ.. ညနေကမှပြသနာတက်လာတာ.. အလကားနေရင်းချုပ်ချယ်နေလို့ စိတ်ညစ်လို့ကလပ်ကိုခိုးထွက်လာတာ.. နင်လုပ်မှဟိုကသိပြီး ကွိုင်ပိုရှာလိမ့်မယ်..” ဟုပြောလိုက်တော့ ကိုတာယာက ” ကွိုင်လိုချင်ရင်ဆိုင်မှာဝယ်ခိုင်းလိုက်လေ.. ကေသီရဲ့..ဟဲဟဲ..” ဟုပြောလိုက်တော့ သန္တာက ” ဒါမျိုးတော့တက်တယ်ဟက်လား..” ဟုပြောပီး တာယာ ကျောကုန်း ကို တဘုန်းဘုန်း ထုပါတော့သည်။ လမ်းနီကန်ဘောင်သို့ ရောက်သောအခါ ည၂နာရီထိုးနေပြီဖြစ်သော်လည်း လူစုစုရှိနေသေးသည်။
ကိုနောင်ရိုးက ” သောက်ဦးမယ်မှတ်လား ..တာယာ ..” ” သောက်မှာပေါ့ကိုနောင်ရိုးရယ်.. စဉ်းစားနေတာ ဘယ်လိုသောက်ရမလဲလို့ ..ကန်ဘောင်မှာထိုင်သောက်ရင် အဖမ်းကခံရဦးမယ် အချုပ်ထဲလဲမအိပ်ချင်ဘူးဗျ..” ” မင်းတို့နှစ်ယောက် ကန်ဘောင်ပေါ်သွားလေ ငါနဲ့ကေသီနဲ့ကားပေါ်မှာထိုင်သောက်မယ်..မင်းတို့ပြန်လာမှ ငါတို့တစ်လှည့်တက်မယ် ..” သန္တာက ကန်ဘောင်ပေါ်ပြေးတက်သွားပီး တာယာကအနောက်ကနေလိုက်တက်သွားတော့မှ ကိုနောင်ရိုးက အရက်ကိုတစ်ခါသုံးခွက်လေးထဲငှဲလိုက်ပီး ” ဘာတွေညစ်နေတာလဲကေသီ.. ရင်ဖွင့်ချင်ဖွင့်လို့ရတယ်နော်..” ဟုပြောလိုက်ပြီးကေသီ့လက်သို့အရက်ခွက်ကမ်းပေးသည်။
အရက်တစ်ငုံသောက်လိုက်ပီး ကေသီက ” ဒီလိုပါပဲ ကိုနောင်ရိုးရယ်.. လက်ရှိဘဲပေါ့.. အဟက်ဟက်.. တော်တော်တရားတဲ့လူ ပထမဘဲက ချုပ်ချယ်လို့ သူနဲ့ဆိုရင်လွတ်လပ်မလားဆိုပြီးတွဲမိပါတယ် .. အစတုန်းကတော့လုပ်ချင်တာလုပ် ဘာမှမပြောဘူး.. အခုနောက်ပိုင်းလဲကျရော ဟိုမသွားနဲ့ဒီမသွားနဲ့.. ဟိုလူနဲ့မတွဲနဲ့ဒီလူနဲ့မတွဲနဲ့ဆိုပီး လိုက်ချုပ်ချယ်နေတယ်လေ..” ” အော်..ညီမရယ် သူက ညီမကိုချစ်လို့ချုပ်ချယ်တာနေမှာပေါ့.. တစ်ခြားလူတွေနဲ့ဆိုရင် ညီမလိုချောချောလှလှလေးကိုစိတ်မချလို့ နေမှာပါ..” ” အလကားပါကိုနောင်ရိုးရာ.. သူ့တုန်းကလဲ ညီမက ရီးစားရှိတာသိသိနဲ့လိုက်တာ နောက်ဆုံး ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်ပြီးပါပီပြောတာကို လက်ခံတယ်ဆိုတာကြီးပဲ.. လုပ်ချင်တာလုပ်ပါတဲ့..သူ့ကိုချစ်နေရင်ရပြီ ဆိုပြီးပြောတာ..” ဟုပြောလိုက်ပြီး ” အမြည်းတွေကော ကိုနောင်ရိုး..” ” အမြည်းတွေနဲ့ရှေ့ခန်းမှာထားဖို့နေရာအဆင်မပြေဘူး.. ။
ကားအနောက်ခန်းသွားမလား ..” ” သွားလေ ..အမြည်းမပါတော့ သောက်လို့မကောင်းဘူး..” ဟုပြောပီး ကားအနောက်ခန်းသို့အရှေ့ခန်းကနေ ကျော်တက်လိုက်သည် စကပ်အတိုလေးဝတ်ထားသဖြင့် ဖြူဖွေးဝင်းမွတ်နေသောပေါင်သားလေးများကြားမှ ပန်းရောင်အတွင်းခံလေးကထင်းခနဲနောင်ရိုးမျက်စိထဲမြင်ဖြစ်အောင်မြင်လိုက်သေးသည်။ ကားအနောက်ခန်းကေသီရောက်တော့ ရှေ့ခန်းကနေ အရက်အမြည်းနင့်ရေခဲစသည်တို့ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပြီး အမြည်းထုတ်တွေကို အရှေ့ထိုင်ခုံအနောက်ဘက် ချိတ်တွင်ချိတ်ခိုင်းလိုက်ပီး အနောက်ခန်းသို့ ကေသီ့ကဲ့သို့ကျော်ခွပြောင်းလိုက်သည်။
တမင်တကာပင် ခြေချော်သည့်ပုံစံလုပ်ပီး ကေသီ့ဘက်သို့ လည်ကျအောင်ဖန်တီးလိုက်သည့်အချိန်တွေ ကေသီက လှမ်းထိန်းပေးသဖြင့်ရင်ခွင်ထဲသို့မသိမသာလက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းထောက်လိုက်သည်ပြီး လက်ဝါးနှင်ထိမိသည့်နို့အုံကိုတစ်ချက်ညှစ်လိုက်ပါတော့သည် ” အေမ့ ..” ကေသီ့ပါးစပ်ကယောင်ပြီးထွက်လာသည်နှင့်လက်ကိုပြန်ရုပ်ကာ ” ဆောရီးညီမ ..အကိုချော်သွားလို့..” ဟုပြောပြီး ဘေးသို့ထိုင်ချလိုက်သည်။
ကားအနောက်ခန်းက လူ၎ယောက်လောက်ထိုင်လို့ရပေမယ့် ကေသီ့နားတိုးထိုင်ပီး အရက်ကိုခွက်ထဲငှဲ့ကာ တစ်ကျိုက်ထဲမော့သောက်လိုက်တော့သည်။ နောင်ရိုး ၏လက်က တမင်ကိုင်လိုက်မှန်းသတိထားမိသွားသောကေသီမှာစိတ်ထဲဖျင်းကနည်းဖြစ်သွားပြီး ပိပိလေးပင်ရှုံ့မိသွားသည်။စိတ်ထဲကနေလဲ နာမည်ကသာရိုးတာလူကမရိုးဘူးပဲဟုတွေးလိုက်ပြီး လက်ထဲရှိခွက်ကို အကုန်မော့ချလိုက်ပါတော့သည်။ ” ကိုနောင်ရိုးအကြောင်းလဲပြောပြလေ..” နောင်ရိုးက အမြည်းတစ်ဖက်ကိုတူနဲ့လှမ်းဆွဲရင်း ပါးစပ်ထဲထည့်ဝါးကာ ” ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိပါဘူး.. ကျွန်တော်က စတိုးဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်.. အားတဲ့အချိန်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တယ် .. ဒီလောက်ပါပဲ..” ဟုပြောပြီး အမြည်းတစ်ဖက်ကို တူလေးဖြင့်ညှပ်ကာ ပါးစပ်နားလှမ်းပေးသည်။
ကေသီကလဲ အလိုက်သတိနဲ့ တူပါဝင်တဲ့အထိပါးစပ်လေးဟပြီးလှမ်းဟတ်လိုက်သည်။ လက်ထဲကုန်သွားသောခွက်ထဲလဲ ထပ်မံဖြည့်ပေးနေတုန်းကေသီက ” အချစ်ရေးကိုမေးတာကိုနောင်ရိုးရဲ့.” ဟုပြောလိုက်တော့ သူကရယ်ပြီး ” ကျွန်တော်က အိမ်ထောင်ကွဲပါ.. မိန်းမကပစ်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ..” ကေသီက မျက်ခုံးလေးပင့်ပီး ” ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ကိုနောင်ရိုးရဲ့..” ” ကျွန်တော့်ဒဏ်မခံနိုင်လို့ ..” ကေသီက ” ကိုနောင်ရိုးကဆိုးလို့လား..” ” အသောက်အစားနည်းနည်းတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ.. ။
သူကလဲမပြောပါဘူးသောက်တာစားတာကို..” ” အရမ်းမူးအောင်သောက်လို့လား ဒါဆို..” ဟုမေးလိုက်တော့ နောင်ရိုးက ကေသီ့နားနားကိုကပ်ပီး ” အမူးလွန်ပီးအိပ်ပျော်သွားရင် သူကပိုတောင်သဘောကျသေးတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ကအရမ်းထန်လို့လေ ..” ဟုပြောလိုက်တော့သည်။ နားထဲသို့ အရမ်းထန်လို့လေ ဟူသောစကားသံနှင့်အတူ မျက်စိထဲ ကိုနောင်ရိုးလို ရင်အုပ်ကျယ်ကျယ်ဗလကောင်းကောင်းက တရစပ်ပစ်ဆောင့်နေသည့်ပုံမြင်ယောင်မိပြီး လက်ထဲကကိုင်ထားသည့်တစ်ခါသုံးခွက်လေးကို ညှစ်မိလိုက်ပါတော့သည်။အရက်များပေါင်ပေါ်သို့ ဖိတ်ကျကုန်တော့ သူမရော နောင်ရိုးပါ အလန့်တကြားဖြစ်သွားပီး ကားရှေ့ခန်းရှိတစ်ရှုးဘူးကို နှစ်ယောက်သားလှမ်းယူလိုက်တော့သည်။
နှစ်ဦးလုံးတစ်ပြိုင်ထဲယူလိုက်သလိုဖြစ်သွားသောကြောင့်မျက်နှာချင်းတော်တော်နီးကပ်သွားသည်။ နောင်ရိုးက လျှော့ပေးပြီး ပြန်ထိုင်လိုက်သဖြင့် ကေသီက အရှေ့ဘက် တစိရှုးဘူးထဲကတစ်ရှုးများထုပ်လိုက်ပြီး အနောက်ဘက်ကိုလှမ်းပေးကာ ” ကိုနောင်ရိုးယူထား ..” ဟုပြောပီ တစ်ရှုးများကို တစ်ရွက်ချင်းထုတ်ယူကာ နောက်ကြည့်မှန်ကနေ လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ လိုအပ်တာထက်ပိုကုန်းထားသဖြင့် သူမဖင်မှာ နောင်ရိုးမျက်နှာနှင့်တစ်တန်းထဲဖြစ်နေပီး နောင်ရိုးမှာလဲ ယခုပင် ကိုက်စားတော့မတက် စူးစိုက်ကြည့်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ငွေရောင်ကိုယ်ကျပ်စကပ်အတိုလေးအောက်က ပင်တီယာလေးထင်းနေသည်ကို ကြည့်ရင်းနောင်ရိုးတစ်ယောက်အာခေါင်ခြောက်လာကာ လက်ထဲကခွက်ကို မော့လိုက်ပါတော့သည်။
တစ်ရှုးယူပြီး ပြန်အထိုင်နှင့်တိုးသောအခါ လက်ကိုဖင်ဖြင့်ရိုင်ချလိုက်သလိုဖြစ်သွားပီး တစ်ဝက်လောက်မှောက်ကျသွားပါတော့သည်။ကေသီက ” အယ် ..မှောက်ပြန်ပြီ ..ဟိဟိ ..” နောင်ရိုးပေါင်ပေါ်သို့မှောက်ကျနေသော အရက်များကို တစ်ရှုးဖြင့် သုပ်ပေးပါတော့သည်။ ” မှောင်နေတယ်မမြင်ရဘူး..” ” ဟုတ်တယ်.. မှောင်နေရင်သိပ်မကောင်းဘူး .. ကျွန်တော်ကမီးဖွင့်ထားမှအားရတာ .. ” ” ကိုနောင်ရိုးစကားကြီးကလဲ ကြောက်စရာကြီး..” ” ကေသီကလဲဗျာ.. ကျွန်တော်ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတက်လို့ပါ.. ကျွန်တော့်မိန်းမက မီးပိတ်ထားမှနေတက်တာ..
ကျွန်တော်ကမီးဖွင့်ထားချင်တာ.. အဲ့မှာစတာပဲ ပြဿနာက..” ” ဟုတ် ” ” နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်မိန်းမက ကေသီ့လိုတောင့်တောင့်တင်းတင်းမဟုတ်ဘူး.. လူကောင်သေးတယ်..” ” ရှင်..” ” အတည်ပြောတာ.. လူကောင်ကခပ်သေးသေး ပိန်ပိန်ပါးပါးလေး.. ကေသီ့လိုသာ တောင့်ရင်တော့ မီးဖွင့်ပြီးဆွဲလိုက်ရရင်.. အမြင်ရော.. အကြားရော.. အထိအတွေ့ရော.. အကုန်အရသာရှိလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်းဗျာ..” ” ညီမကတောင့်တယ်ထင်တယ်ပေါ့လေ.. သန္တာက ပိုတောင့်တာမဟုတ်ဘူးလား..” ” သန္တာက အိုးကောင်းတယ်ခေါ်တယ် ကေသီရဲ့.. အိုးပဲကောင်းတာပါ နို့ကျတော့ ကေသီကပိုထွားတာ..။
လေးဘက်ကုန်းဆွဲရင် နို့တွေရမ်းခါနေမှာပဲ.. တာယာက အိုးကြီးတာကြိုက်တာလေ. အဲ့ဒါကြောင့် သန္တာနားကပ်နေတာ ..” ကလပ်မှာထဲကအနည်းငယ်ထွေလာကြသဖြင့် စကားတွေက အနှောင့်အသွားမလွတ်တာကို နှစ်ယောက်သားပြောဆိုနေကြပြီဖြစ်သည်။ ကေသီကစကားပြောရင်း နောင်ရိုးဘောင်းဘီပေါ်သို့ဖိတ်ကြထားသည့်အရက်များကို သေသေချာချာသုပ်ပါတော့သည်။ ပေါင်ရင်းနားကိုသုပ်နေရင်း ကေသီက ပေါင်ကြားဂွထဲကဖုဖုဖောင်းဖောင်းကြီးကိုစမ်းမိကာ စိတ်ထဲမှနေ၍ကြီးတာတော့ကြီးလောက်တယ်ဟုတွေးနေမိသည်။ ၂ယောက်သား သောက်လိုက် ရိသဲသဲစကားပြောလိုက်ဖြင့် တစ်နာရီကြာသည်အထိကားပေါ်ထိုင်နေပြီးမှ သန္တာနှင့်တာယာတို့ပြန်ရောက်လာသည်။
တာယာကပြုံးစိစိလုပ်နေပြီး ” ကေသီပြန်ဖို့နောက်ကျနေဦးမယ်..” ကေသီက ရီဝေဝေဖြင့်ကြည့်ကာ ” အိမ်မပြန်လဲရတယ်.. ပြန်လဲရတယ် ..အေးဆေးပဲ..” ” ကောင်မရီးတော်တော်ကောင်းနေပြီလား.. ငါတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ကန်ဘောင်ပေါ်သွားရတာ.. ဟိဟိ ..” ဟုပြောပြီး ကားနောက်ခန်းသို့နှစ်ယောက်သားဝင်လာပါတော့သည်။ နောင်ရိုးက ဘေးကပ်ပေးသော်လည်း ကေသီ့ပေါင်တစ်ဘက်က နောင်ရိုးပေါင်ပေါ်တင်ကာ ဘေးတစ်စောင်းဖြစ်နေပါတော့သည်။ သန္တာက အရက်တစ်ခွက်ငှဲ့သောက်လိုက်ပြီး တာယာ့ဘက်ကိုလှည့်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ပြီး အရက် တိုက်လိုက်သည်။
တာယာကနှုတ်ခမ်းကိုစုပ်ပြီး ” အရက်ကပျော့သွားသလိုပဲကွာ..” ” ကိုနောင်ရိုးနဲ့ကေသီအားကျအောင်တမင်လုပ်လိုက်တာ ဟားဟား..” ကားနောက်ခန်းမှာ လေးယောက်ထိုင်ရင်း အရက်ကိုသောက်နေကြသော်လည်း သန္တာပေါင်ကိုတာယာကပွတ်လိုက် နို့ကိုမထိတထိ ကိုင်လိုက်ဖြင့်လုပ်ပြနေတော့ နောင်ရိုးက ” ငါတို့တစ်နေရာရာသွားရအောင် ဒီမှာကကြာနေပြီဆိုတော့ပျင်းလာပြီကွ..” ” အဲ့ဒါဆိုသွားနေကြနေရာပဲ သွားရအောင်လေ..ဒီတစ်ခါကေသီပါ ပါလာတော့ လူပိုစည်တာပေါ့..” နောင်ရိုးက ကေသီ့ပေါင်လုံးလေးတွေကိုလက်နဲ့မသိမသာပွတ်လိုက်ပြီး ” ကေသီလန့်နေပါဦးမယ် မင်းတို့ကလဲ..ဟိုရောက်မှကြည့်စီစဉ်တာပေါ့ ..” ကားလေးကိုအသာအယာပင် သွားနေကြဟော်တယ်သို့နောင်ရိုးကမောင်းသွားလိုက်သည်။ ကားပါကင်ထိုးပြီးတော့ ဧည့်ကြို့ကောင်လေးလိုက်ပို့သော အခန်းတစ်ခုထဲလေးယောက်သားဝင်လိုက်ပြီး အမြည်းနှင့်သောက်စရာများကိုထပ်မှာလိုက်သည်။ အခန်းက အခန်းကျယ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်နှစ်လုံးပါရှိသည် ဒေါင့်ချိုးပုံစံအခန်းဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ကုတင်နှစ်လုံးက တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမျက်ကွက်အနေအထားရှိနေလေသည်။
အလည်ရှိ စားပွဲတွင်ထိုင်နေပါက ကုတင်နှစ်ခုလုံးအတိုင်းသားမြင်နေရလေသည်။ တစ်ခြားတစ်ခန်းကတော့ ရေချိုးခန်းအိမ်သာ ဖြစ်သည်။ သန္တာ့ကို တာယာက ကုတင်တစ်လုံးပေါ်တွန်းလှဲလိုက်ပြီးအပေါ်ကနေထပ်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေတုန်း ကေသီက ရေချိုးခန်းထဲဝင်လိုက်ပြီး ကိုယ်လက်သန့်စင်လိုက်သည်။ အပြင်ရောက်တော့ သန္တာ့အပေါ်ပိုင်းက ဘော်လီလေးသာကျန်ရှိနေပြီး တာယာက အပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်းဖြင့် သန္တာရင်ညွှန့်ကိုနမ်းလျှက်ရှိသည်။
စာပွဲခုံမှာ နောင်ရိုးက ဟော်တည်ကလာပို့သည့်အရက်ကိုစိမ်ပြေနပြေသောက်ရင်း ” ကေသီ ..လာလေပွဲကောင်းနေပြီ.. လာကြည့်လှည့်..” ” အာ.. မျက်စိရှက်စရာတွေ ဘာတွေမှန်းလဲသိဘူး..” သန္တာက တာယာ့ဦးခေါင်းကို ဗိုက်ပေါ်သို့ရွှေ့ပေးရင်းကနေ၍ ” ပိုမနေနဲ့ကောင်မရီး.. နင့်ဖုန်းထဲမှာအောကားတွေထည့်ထားတာငါသိတာပဲ.. အခု အောကားကြည့်နေတယ်သဘောထားလိုက်.. အာ့..နာတယ်..မကိုက်နဲ့လေကိုတာကလဲ..” ကေသီက စားပွဲရှိရာသို့သွားလိုက်ပြီး အရက်ခွက် တစ်ခုကိုယူကာ သန္တာနှင့် တာယာတို့စုံတွဲရှိရာသို့လှမ်းသွားလိုက်သည် သန္တာ ဗိုက်ကိုနမ်းရှုံ့ယက်နေသော တာယာက မော့ကြည့်တော့ ကေသီက အရက်ခွက်ကို သန္တာဗိုက်ဖြူဖြူလေးပေါ်နည်းနည်းသွန်ချလိုက်ပြီး သောက်လေကိုတာယာ ဟင်းဟင်း တာယာက လျှာဖြင့်လိုက်ယက်နေရင် လက်မထောင်ပြသည်။
ကျန်အရက်များကို သန္တာကမော့လိုက်ပြီး ” ကွကိုယ်ထိုင်နေစမ်းပါကောင်မရီးရယ်.. နောက်မှ တိုက်တော့ ငါဂွတ်တော့မှာဟ..” တာယာက မပြောမဆို ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဆွဲထောင်ကာ အဖုတ် ကိုကုန်းယက်တော့သည်။စကပ်ကအတို အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုမချွတ်ပဲ ယက်နေတာတောင် သန္တာတစ်ယောက်ပါးစပ်ကြီးဟ၍ ” ကောင်းလိုက်တာ.. ယက်.. ယက် အရမ်းမိုက်တယ်.. အား.. ရှီး..” ကေသီတစ်ယောက် စားပွဲရှိရာပြန်သွားလိုက်တော့ နောင်ရိုးက တစ်ခြားခုံမှာပေးမထိုင်ပဲ ကေသီ့ကိုလှမ်းဆွဲကာ ပေါင်ပေါ်တင်လိုက်လေသည် အလိုက်သင့်လေးထိုင်လိုက်ရင်း ကေသီက နောင်ရိုးကိုကြည့်လိုက်တော့ ကေသီ့ခါးကိုဖက်ထားရင်းနှုတ်ခမ်းလေးကိုလှမ်းနမ်းပါတော့သည်။ အရက်အရှိန်ကလဲပါ ကားပေါ်မှာထဲက စကားတွေခေါ်ထားပြီးသားဖြစ်နေသဖြင့် ကေသီလဲငြင်းဆန်မနေတော့ပဲ စိတ်ကိုလွှတ်ကာ အလိုက်သင့်နေလိုက်ပါတော့သည်။ နောင်ရိုးကလက်သွက်သည် နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေရင်းလျှာတိုက်စစ်ဆင်သလို လက်ကလဲ နို့အုံကို အင်္ကျီပေါ်ကနေ ကိုင်သည် ပေါင်ကြားထဲကိုနှိုက်သည်။
အရည်ထွက်နေပြီဖြစ်သည့်ကေသီ့ အဖုတ်ထဲကို လက်ခလည်ထိုးထည့်နေတုန်း သန္တာတို့အတွဲထံမှ လိုးသံဆူညံစွာထွက်ပေါ်လာပါတော့သည်။ ကေသီလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တာယာ့ကိုယ်လုံးကြီးက ကုတင်ပေါ်တွင် ခါးကိုကိုင်းကိုင်းပြီး ဆောင့်ဆောင့်ချနေလေသည်။ နောင်ရိုးက ကေသီ့အင်္ကျီကိုဆွဲလှန်ကာ နို့တစ်လုံးကိုဖမ်းစို့ရင်း ညာဘက်လက်က ခပ်သွက်သွက် အဖုတ်ထဲသို့အထုတ်အသွင်းလုပ်တော့သည် သန္တာတို့အတွဲကိုကြည့်ရင်း ကေသီက စိတ်တွေအရမ်းပါလာပြီး နောင်ရိုးလက်ကိုဆွဲကာ တစ်ခြားကုတင်ဆီသို့ သွားလိုက်သည် နောင်ရိုးကိုကုတင်ပေါ်တွန်းလိုက်ရင်း ဘောင်းဘီကိုချွတ်ကာကြည့်လိုက်တော့ လီးကြီးက အမွှေးများရိတ်ထားကာနောက်ရိုးဗိုက်ပေါ်တွင်လှန်တင်နေပြီး ချက်နားအထိရောက်အောင်ရှည်သည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်။ကေသီတစ်ယောက် တံတွေးကိုမျိုချလိုက်ပြီး ဂွေးဥ အပေါ်ပိုင်းလီးအရင်းကနေ၍ လျှာဖြင့်စတင်ယက်ပါတော့သည်။
ဟိုဘက်ကုတင်ကလဲပွဲကြမ်းသည် ဆီးခုံလျင်ထိသံ ငြီးတွားသံတို့က စည်းချက်ညီညီထွက်ပေါ်နေလေသည်။ ကေသီလဲ နောင်ရိုးလီးကိုယက်ရင်း လီးထိပ်ရောက်တော့ ပါးစပ်ဖြင့်ငုံလိုက်သည်။ ဒစ်တစ်ခုလုံးမနည်းဝင်အောင်ငုံနေရပြီး လျှာဖျားလေးဖြင့် လီးထိပ်ကိုထိုးကလိလိုက်တော့ နောင်ရိုးက ” ကေသီ.. နောက်မှစုပ်တော့ ..လိုးရအောင်..” ရမ္မက်အသံဖြင့် ပြောလာသဖြင့် ကေသီက ကြာကြည့်ကြည့်ပြီး စကပ်ကိုမကာ အပေါ်မှခွလိုက်ပါတော့သည်။လီးထိပ်တည့်တည့်ကိုချိန်ရင်း စိတ်ထဲကနေ၍ ဒီလီးကြီးနဲ့လိုးလို့ဖြစ်ပါ့မလား ဟုတွေးနေတုန်း ခါးကိုကိုင်ကာ အမှတ်တမဲ့ဆောင့်ချခြင်းခံလိုက်ရလေသည် ။
” ဗြစ် ..ဗြစ် ..အား ..နာတယ်ကိုနောင်ရိုး..” ” ကျပ်လိုက်တာကွာ .. ဒစ်ပဲဝင်သေးတယ်အရမ်းကျပ်နေပြီ.. အရင်ဘဲတွေကမလိုးဘူးလား..” ” လိုးတာပေါ့အကိုရာ.. ဒါပေမယ့်အကို့လီးလောက်မှမကြီးတာ.. အမလေး..ဖြည်းဖြည်းအကို..ဖြည်းဖြည်း..အဖုတ်ထဲပြည့်နေပြီ ..” ” အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ..” အဆုံးထိဆောင့်ချပါတော့ညီမရာ..” ကေသီလဲအံကိုကျိတ်ပြီး လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်ထဲတစ်ဆုံးရောက်အောင်ထိုင်ချလိုက်ပါတော့သည်။ စိတ်ထဲကအဆုံးထိကောင်းသွားပြီး စောက်ရည်တွေပွက်ခနည်းအံကျလာတာကိုမိန်းကလေးပီပီ သိရှိလိုက်သည်။
အဖုတ်ကကျပ်သည့်အပြင်လီးတစ်ဆုံးဝင်သည်နှင့်စောက်ရည်တွေထွက်ကြလာသည်နှင့်နောင်ရိုးက ခါးကိုကော့ကာ ပင့်ဆောင့်တော့သည်။အစပိုင်းကခပ်မှန်မှန်ဆောင့်နေရင်းက ကေသီကိုယ်တိုင်စိတ်ပါလာသဖြင့် အပေါ်ကနေ၍ လီးတစ်ဝက်ခန့်အထုတ်အသွင်းပြုကာ ပြန်လည့်တုန့်ပြန်နေပြီဖြစ်သည်။ နို့ထွားသဖြင့် ဆောင့်လိုက်တိုင်း တုံတုံနေသည့်မြင်ကွင်းအပြင် ကေသီ့နှုတ်ကနေ တိုးတိုးလေးငြီးတွားသည့်အသံ၊ နောက်ပြီးအဖုတ်အတွင်းသား၏ထူးကဲသည့်အရသာကိုခံစားနေရင်း နောင်ရိုးတစ်ယောက် စိတ်ထဲကနေ၍ ကေသီ့ကိုသုတ်ခမ်းတဲ့အထိ အမုန်းလိုးလိုက်ဦးမှပဲဟုတွေးနေပါတော့သည်။ ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged သူပွိုငျကိုပွိုငျ